Mpanolo-tsaina vaovao momba ny haino aman-jery - Fikarohana, sosialy, horonan-tsary ary finday
Rehefa nanomboka aho DK New Media, iray amin'ireo fanapahan-kevitra raisina dia ny fomba fanamarihana ny orinasa. Rehefa mieritreritra momba ny marketing sy ny fivoarany aho dia ampitahako matetika amin'ny mpitarika sy ny symphony. Amin'ny maha-mpanolo-tsaina ahy dia mila ho toy ny mpitari-dalana aho, manampy amin'ny fampifangaroana ireo mpampita vaovao sy hampiatrano azy ireo hahatratra ny naoty mety amin'ny fotoana mety, mba hahatanteraka ny paikady.
Tsy nety aho taona ny tenako amin'ny fanomezana anarana ny tenako ho consultant marketing. Tsy te hametra ny tenako tamin'ny fiantsoana ny tenako hoe a consultant fikarohana or consultant amin'ny media sosialy. Izany dia toy ny milaza fa mpitendry lokonista, flautista, na mpitendry zavamaneno ianao. Fa kosa, te-hamorona marika misokatra kokoa ny tenako aho.
Ny fampahalalam-baovao vaovao dia tsy midika hoe tsy miraharaha ireo media taloha aho, ary tsy mametra ahy amin'ny ho avy koa. Hisy foana zavatra vaovao. Ny fakan-kevitra amin'ny haino aman-jery vaovao dia mety ahitana ny fikarohana, ny sosialy, ny horonan-tsary, ny finday… na izay mety ho fantsona rehetra. Tsy midika izany fa hampiroborobo ny tenako ho manam-pahaizana amin'ireo arena rehetra ireo aho. Izaho dia efa miara-miasa amin'ireo orinasa mpiara-miasa sy masoivoho miasa manokana amin'ireo lohahevitra ireo.
Amin'ny maha mpanolo-tsaina media vaovao ahy dia mametraka fanantenana azoko ampiana izy misy haino aman-jery… ary ampianaro ny mpanjifako momba ny fivoarana farany indrindra amin'ny sehatry ny fifandraisana. Ary manandrana mianatra momba sy manangana fahaiza-manao amin'ny fironana vaovao rehetra aho. Indraindray aho milaza fa do consulting amin'ny media sosialy na consulting fikarohana… fa tsy ny tenako irery no soratako manokana amin'ireo faritra ireo.
Ireo mpitantana dia tsy voatery mpitendry zavamaneno mahay miaraka amina zavamaneno iray; na izany aza, azon'izy ireo tanteraka ny fomba fampiasana ny zava-maneno tsirairay, ampiarahan'izy ireo miasa, ary anaovany mozika mahafinaritra. Ity dia orkestra marketing.
Mampalahelo fa tsy niantso ny tenanay ho mpitarika marketing izahay!
Ity misy fanaovana mozika marketing tsara tarehy!
Tags: fifandanjanampitarikaconsultant marketingconsulting marketingorkestra marketingMusicmusical instruments